သိပ္ပံမောင်ဝပြောသော မြန်မာမိန်းမတို့၏ အခြေအနေ (သို့) ထိုခေတ်က မဝါဒ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
သိပ္ပံမောင်ဝပြောသော မြန်မာမိန်းမတို့၏ အခြေအနေ (သို့) ထိုခေတ်က မဝါဒ	Posted by mm thinker on June 22, 2012
Posted in: Article, Gender.	Tagged: Article, Gender.	2 Comments
ဒီခေတ်မှာ အထူးအဆန်းမဟုတ်သလို ထင်ကြတဲ့ မိန်းမနဲ့ အရက်သေစာ သောက်စားမှုကိုလည်း တင်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ မုဆိုးမနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်ကိုလည်း ထည့်ရေးထားပါသေးတယ်။
ပညာရေးတွင် မြန်မာမိန်းမတို့၏ အခြေအနေ
ပညာရေးမှာ မြန်မာမိန်းမများ အရေအတွက်နည်းသည့်တိုင် မညံ့ပုံကို ပုဂံခေတ်ကနေချီပြီး ပြန်ပြောထားပါတယ်။ ကျစွာမင်းကြီးရဲ့ သမီးတော်ဟာ သဒ္ဒါကျမ်းတစောင်ကို ပြုစုခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ရဟန်းများကိုပင် စာချတဲ့အကြောင်းနဲ့ ထိုလက်ထက်က အပျိုကညာများ ဆန်ဖွပ်၊ ဈေးရောင်းရင်း သဒ္ဒါ၊ သင်္ဂြိုဟ် ခဲရာခဲဆစ်တို့ကို လေ့လာကြောင်းတွေ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သမိုင်းထဲက ပညာရှိမိန်းမများအဖြစ် ဇင်းမယ်မိဖုရား၊ ပဲခူးမိဖုရား၊ နန်းတွင်းမိညို၊ နန်းတွင်းမိဖြူ၊ ရဝေရှင်ထွေးစတဲ့ မိဖုရားနဲ့ နန်းတွင်းသူတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ သိပ္ပံမောင်ဝတို့ခေတ်က ပညာရေးမှာ ယောကျာ်းလေးတွေထက် မိန်းကလေးက ပညာသင်ကြားရမှု နောက်ကျတာကြောင့် အနည်းငယ် ညံ့သွားပုံ၊ မိန်းကလေးကျောင်းများ ပေါ်လာတာကြောင့် အိုင်အေ၊ ဘီအေ အောင်တဲ့ မိန်းကလေးများရှိလာပုံ၊ အောက်ခြေလူတန်းစား မိန်းမတွေကတော့ ဝမ်းဝခါးလှအောင် အပမ်းတကြီးရှာဖွေရတာကြောင့် တိုင်းရင်းစာကိုပင် မဖတ်နိုင်သူတွေ ရှိကြောင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
တရားဥပဒေတွင် မြန်မာမိန်းမတို့၏ အခြေအနေ
မိန်းမတို့ အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဓမ္မသတ်စာစောင် တခုနဲ့တခု မညီညွတ်တာကြောင့် အရှုပ်အရှုပ်အထွေးထွေး ဖြစ်နေလို့ ရှေ့နေရှေ့ရပ်နဲ့ တရားသူကြီးတွေ တရားမှန်လမ်းမှန်ရောက်ဖို့ အကြပ်အတည်းနဲ့ ကြုံရကြောင်းကို ထောက်ပြထားပါတယ်။
အသက် ၂၀ မပြည့်ခင် မိန်းကလေးက ခိုးရာလိုက်တဲ့အခါ မိဘတွေ သဘောမတူက အချိန်မရွေးခွဲပစ်နိုင်ကြောင်းကို မြင်းကွန်းဓမ္မသတ်ကို ကိုးကားပြီး “သူကညာကို၊ ကြိုက်ပါသောအား၊ ယောကျာ်းခိုး၍၊ တကျိပ်စေ့ပင်၊ သားတည်းမြင်လည်း၊ မိခင်ဘမင်း၊ မဆောက်နှင်းက၊ မနေရချေ၊ မိဘကြိုက်သူ၊ ပေးစားဟူ၏” လို့ ပါကြောင်းနဲ့ မိန်းကလေးက အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေကြောင်း ပြောထားပါတယ်။
မယားကြီး၊ မယားငယ် ပြဿနာ၊ မယားကြီးနဲ့ မယားငယ် အခွင့်အရေး၊ ဒါမျိုးတွေ ပပျောက်ဖို့ ထိုခေတ်က အစိုးရတွေ ဥပဒေကို တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲနေကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ လင်ကွာ မယားကွာ ပစ္စည်းခွဲဝေပုံများနဲ့ လူမျိုးခြားနဲ့လက်ထပ်တဲ့အခါ မြန်မာမိန်းမများ နစ်နာမှုဆိုင်ရာတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာရေးတွင် မြန်မာမိန်းမတို့၏ အခြေအနေ
မိန်းမတို့၏ အခြေအနေနဲ့ အခွင့်အရေးကို စဉ်းစားရာမှာ ဘာသာတရားကို မပယ်ထားသင့်ကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအရ ယောက်ျားက မိန်းမထက် မြတ်သည်ဟု ဖြေဆိုသူများမှာ နက်နက်နဲနဲ မတွေးတောဘဲ ဖြေဆိုသူများဖြစ်ကြောင်း ပြောထားပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူအဆအရ မြန်မာတွေဟာ ဂုဏ်အသက်ကို အရေးဂရုဓမ္မ အလေးပြုရတာကြောင့် ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမတို့ရဲ့ အခြေအနေကို တမျိုးတမည် ဆင်ခြင်နိုင်သေးကြောင်း ထောက်ပြထားပါတယ်။ အမိကို ဖြစ်စေ၊ အဖကို ဖြစ်စေ ပြစ်မှားလျှင် အပြစ်ကြီးမှု အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်း ဥပမာပေးထားပါတယ်။
ယောကျာ်းနှင့် မိန်းမ မြတ်၏ အမြတ်၏ အကျိုးအပြစ်များကို ဘုရားဟောသုတ္တန်များ၊ မန်လည်ဆရာတော်ရဲ့ မဃဒေဝလင်္ကာများနဲ့ ယှဉ်ပြီး ရေးထားပါတယ်။ ယောကျာ်း၊ မိန်းမ မဟူ အတွင်းဓာတ်ခံသာလျှင် ပဓာနအရင်းခံဖြစ်ကြောင်း နိဂုံးချုပ်ထားပါတယ်။
တိုင်းရေးပြည်ရေးတွင် မြန်မာမိန်းမတို့၏ အခြေအနေ အရေးအခွင့်
တိုင်းရေးပြည်မှု၊ ယခုခေတ်အခေါ် နိုင်ငံရေးမှာ မိန်းမများ ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရရေး ဆူပူဆောင်းဆိုကြသည်မှာ အနောက်နိုင်ငံက စကြောင်း၊ မြန်မာပြည်သမိုင်း အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် မိန်းမများရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဘုရင်မကြီးရှင်စောပု၊ ရှင်စောနစ်၊ မင်းဆက်ငါးဆက်တိုင် မိဖုရားဖြစ်ခဲ့သူ ရှင်ဘို့မယ်၊ အလယ်နန်းမတော် ဆင်ဖြူမရှင် စသူတို့မှအစ မြန်မာမင်းများ လက်ထက်တော်အခါက မိန်းမရွာသူကြီး၊ မိန်းမဆယ်အိမ်ခေါင်း၊ မိန်းမစာချီ စသူတို့ ရှိခဲ့ကြောင်းတွေ ဖော်ပြထားပါတယ်။
၁၁၁၉ ခုနှစ်မှာ မြေခဲရွာသူကြီးသည် မိန်းမဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၁၂၇ ခုနှစ် တောင်ပုံတန်းအဝင် ရေမြက်ရွာစစ်တမ်းမှာ ရွာသူကြီးက မမိငြိမ်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် ပုဂံနယ်မှာ မိန်းမရွာသူကြီး ၆ ယောက်ရှိကြောင်းတွေ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပုသိမ်မြို့ ဆားကျင်းများကို သမီးများက ဆက်ခံရပြီး သားများက ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရကြောင်း၊ တချို့သော ရေနံရိုးတို့မှာ ယောကျာ်းက မဆက်ခံရဘဲ သမီးမိန်းမများကသာ ဆက်ခံခွင့်ရကြောင်း ရေးထားပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ခေတ်ရောက်မှ မိန်းမသူကြီး၊ ဆယ်အိမ်ခေါင်းတွေ ပပျောက်ကုန်တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၁၂၈၇ ခုနှစ် တပို့တွဲလဆန်းထုတ် သူရိယ သတင်းစာမှာ မင်းတိုင်ပင်အမတ် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ မြူနီစီပယ် လူကြီး ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ဝင်ရောက် မဲဆန္ဒပေးဖို့ အခွင့်ရပေမယ့် ရွှေတိဂုံဘုရား ဘဏ္ဍာတော်ထိန်း ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးတွေ မဲဆန္ဒယင်ရောက် ပေးပိုင်ခွင့်မရှိလို့ ဝေဖန်ရေးသားထားတာကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
သိပ္ပံမောင်ဝရဲ့ စာတမ်းကို ၁၉၃၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ၊ သြဂုတ်လနဲ့ စက်တင်ဘာလထုတ် ကြီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းကနေ ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ စာတမ်းတခုလုံး အချုပ်အားဖြင့် ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမ တတန်းတစားတည်း ထားမှသာ သင့်မြတ်ကြောင်း၊ တတန်းတည်းဆိုသော်လည်း နေရာတိုင်းတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကျင့်ကြံရန် မဟုတ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ဆိုင်ရာ တင့်တယ်သော နေရာများမှ ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း၊ အကျင့်စာရိတ္တ ချို့ယွင်းပျက်ပြားမည့် နေရာများမှာ မိန်းများဟာ ကောင်းစွာရှောင်ရှားသင့်ကြောင်း သိပ္ပံမောင်ဝက အကြံပြုပြီး သူ့စာတမ်းကို နိဂုံးချုပ်ထားပါတယ်။
← ပညာရေးစနစ် မြန်မြန် လမ်းပွင့်စေချင်	A Cock Match – U Ba Kyi →	2 comments on “သိပ္ပံမောင်ဝပြောသော မြန်မာမိန်းမတို့၏ အခြေအနေ (သို့) ထိုခေတ်က မဝါဒ”
Aung Kyaw Oo on June 22, 2012 at 1:29 pm said:
ှု I think 1936 in first line of this work.
Reply	mm thinker on June 22, 2012 at 11:32 pm said:
ကျနော် မျက်စိရှန်းပြီး မှားသွားပါတယ်။
၁၉၃၆ လို့ ပြင်လိုက်ပါပြီ။